TV Ratings 2017: Dangal oo hogaaminaayo 10-ka filim ee TV-yada loogu daawasho badan yahay 2017 – Filimside.net
TV Ratings 2017: Dangal oo hogaaminaayo 10-ka filim ee TV-yada loogu daawasho badan yahay 2017
October 11, 2017 Zakarie Abdi
Shabakada Boxoffice India ayaa soo daabacday 10-ka filim ee sanadkaan 2017 TV-yada loogu daawasho badan yahay kuwaas oo ay qoysaska si wacan guryaha ugu daawadeen.
Dangal ayaa noqday filimka 2017 TV-yada loogu daawasho badan yahay madaama filimkaan dhamaadkii 2016 tiyaatarada la saaray marka uu tiyaatarada ka dagay ayaa TV-yada laga soo daayay ayadoo 2017 lagu guda jiro.
Dangal waxaa TV-yada ka daawadaan 16-milyan iyo 254 qoys tiro ahaan waxaana lagu xisaabiyay nidaamka loo yaqaan Television Rating Point (TRP).
Dangal wuxuu noqday filimka sedexaad ee Aamir Khan hogaamiye ka yahay kaasi oo TV-yada siweyn looga daawado waxaana ka sareeyaan 3 Idiots iyo PK tiro ahaan inta daawatay sidaa darteed Dangal tiyaatarada iyo TV-yada labada dhinac Blockbuster ayuu ka noqday.
Akshay Kumar filimkiisa Jolly LLB 2 ayaa TV-yada siweyn u qabsaday wuxuuna noqday filimka labaad ee 10-milyan ku dhawaad TV-yada ka daawadaan kadib filimka Dangal aflaanta Hindiga ah ee 2017 Satelite-ka lagu soo daayay.
Sidoo kale Jolly LLB 2 wuxuu noqday filimka sedexaad ee Akshay Kumar sameeyay kaasi oo TV-yada Blockbuster ka noqdo ama tirada ugu badan daawadaan kadib filimada Rowdy Rathore iyo Singh Is Bling.
Hrithik Roshan filimkiisa Kaabil inkastoo tiyaatarada ganacsi wacan uusan ka sameynin hadana TV-yada Hit weyn ayuu ka noqday qoysaska si wacan ayay u daawadeen wuxuuna TV-yada kaga wanaagsanaaday filimka Raees ee SRK hogaamiye ka yahay.
Filimada TV-yada ka gadmaan waa ganacsiga labaad ee laga ogaan karo sida shacabka u jeclaadeen aflaantaas sidoo kalena ay u qalmaan lacagaha xuquuqdooda Satelite-ka lagu iibsaday.
Sidoo kale TV-yada aflaanta ka gadmaan waxay noqdaan kuwo dhaxal ka tagaan ee qoysaska mar walbo daawadaan meeshaasna waxaa kasoo bixi karo waxa loo yaqaan Repeat Value ama filim qiimo ku cel celis ah ama xiiso yeesho sidoo kalena ay suura gal tahay filim Flop noqday in qayb labaad laga sameeyo marka uu TV-yada caan ka noqdo.
Fadlan hoos kaga bogo 2017 filimada TV-yada loogu daawasho badan yahay ee shabakada Boxoffice India soo daabacday:
1. Dangal – 16-milyan iyo 254,000 qoys ayaa daawadeen
2. Jolly LLB 2 – 10-milyan iyo 851,000 qoys ayaa daawadeen
3. Kaabil – 8-milyan iyo 693,000 qoys ayaa daawadeen
4. M.S. Dhoni – The Untold Story – 8-milyan iyo 94,000 qoys ayaa daawadeen
5. Shivaay – 6-milyan iyo 292,000 qoys ayaa daawadeen
6. Commando 2 – 6-milyan 136,000 qoys ayaa daawadeen
7. Raees – 5-milyan iyo 256,000 qoys ayaa daawadeen
8. Badrinath Ki Dulhania – 4-milyan iyo 9,68,000 qoys ayaa daawadeen
9. Naam Shabana – 4-milyan iyo 663,000 qoys ayaa daawadeen
10. Half Girfriend – 4-milyan iyo 227,000 qoys ayaa daawadeen
F.G: Baahubali 2 qiimeyntiisa dhawaan ayay soo bixi doontaa madaama TV-yada lagu sii daayay todobaadyo ka hor waana hubaal inuu rikoor taariikhi ah dhigi doono.
Baahubali qaybtiisa kowaad ayaa ah filimka TV-yada loogu daawasho badan taariikh ahaan kadib filimka Sholay waana hubaal in Baahubali 2 jaceylka loo qaabo qoysaska si waali ah Tv-yada kaga daawan doonaan iskooro lixaad lehna sameyn doono waxaana hawada kusoo deesay Sony TV.
Waxaa Aqrisay 735